Misy Manontany Ask.com? | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 26, 2007 Talata, Novambra 5, 2019 Douglas Karr
Mety nahatsikaritra ianao tamin'ny iray amin'ireo rohy nataoko tato ho ato Ask.com ary Live nanatevin-daharana ny Sitemaps fenitra. Ny teny hoe sitemap dia manazava ny tenany - fitaovana iray ahafahan'ny motera fikarohana mametaka tranokalanao mora foana. Ireo tranokala dia namboarina ao XML mba hahafahan'izy ireo mandany mora foana amin'ny alàlan'ny programa. Izaho dia manana styleheet napetraka amin'ny sitemap ahy mba hahitanao izay mombamomba anao.
Sitemaps sy WordPress
miaraka WordPress, tsotra ny mandeha ho azy sy ny fananganana sitemaps anao. Ampidiro fotsiny ny Plugin Google Sitemap. Mihazakazaka ny kinova 3.0b6 an'ny plugin aho ary mahafinaritra izany. Vao haingana aho no nanova ny plugin ary nanampy ny fanohanan'ny Ask.com koa. Natolotro ny mpamorona ny fanovana nataoko ary manantena aho fa hanampy azy ireo ary hamoaka ny kinova manaraka.
Mandefa ny tranokalanao mankany amin'ny Ask.com
Azonao atao ny mandefa ny sitemap anao amin'ny Ask.com amin'ny tanana amin'ny alàlan'ny fitaovana fandefasana tranokala:
Faly aho nahita an'io ary nanolotra ny tranokalako avy hatrany ary nanomboka niasa tamin'ny fanovana plugin. Fantatro fa nanamboatra ny pejin-tranon'izy ireo ny Ask.com tato ho ato ary nahazo gazety ka nieritreritra aho fa hitarika fifamoivoizana fanampiny izany.
Ny 50% mahery amin'ireo fitsidihako isan'andro dia avy Google fa mbola tsy nahita mpitsidika tokana aho avy any Ask.com! Hitako misintona ny Yahoo! mpitsidika sy vitsivitsy Live mpitsidika… fa tsy misy mpitsidika ny Ask.com. Amin'ny fijerena ny valin'ny karoka Ask.com, maro amin'izy ireo no toa antitra… antitra kokoa (indraindray herintaona) miresaka momba ny Anarako taloha sy lahatsoratra taloha. Angamba izany no antony iray lehibe mahatonga ny Ask.com tsy mahazo fifamoivoizana? Misy aminareo mampiasa Ask.com ve?
Apr 26, 2007 ao amin'ny 11: PM PM
Ny fotoana roa farany nanandramako nanontany.com, tsy namokatra valiny fikarohana tena tsara aho. Maro amin'ireo rohy natolony no tsy teo intsony na tena antitra fotsiny. Tsy fantatro fa nisy olona nampiasa zavatra FA Google intsony. Farafaharatsiny farafaharatsiny manao index matetika.
Wow, laharana Technorati mahafinaritra. Sarotiny ireo.
Apr 27, 2007 amin'ny 6: 49 AM
Ny fehin-kibo farany nanandramako tena nanontaniako no fotoana voalohany nahitako ireo dokam-barotra an'ny rajako. Hitako tamin'izay fa tsy tsara ny valiny. Ny mahavariana, ny Technorati dia tsy mihevitra azy ireo ho fikarohana ambony indrindra ihany koa. Azonao atao ny mitady ny fonenanao amin'ny Ask, ary avy eo ping Technorati miaraka amin'ny URL valiny. Tsy hanapoaka anao ho any amin'ny 100 voalohany izany, fa ny lohan'ny lohan'ny Technorati kosa maimaimpoana!
Apr 27, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Mahazo kapoka 5 ka hatramin'ny 10 avy amin'ny ask.com isan'andro aho (ao amin'ny bilaogiko taloha)… ary ao amin'ilay lahatsoratra iray ihany… ..
Andao hojerentsika raha manatsara ny toe-javatra iainantsika ity sitemap ity 🙂
Apr 27, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Lazao amiko izany.
Heveriko fa ny fifamoivoizana mankany amin'ny bilaogiko dia Google amin'ny alàlan'ny fihotsahan'ny tany, yahoo ary fikarohana mivantana iray segondra lavitra, ary ny Ask dia tsy hita na aiza na aiza.
29 Nov 2007 amin'ny 9:54 maraina
Vao nahita an'ity bilaogy ity aho izao… fa zavatra tsara!
Mar 6, 2008 ao amin'ny 10: PM PM
Fantatro fa lahatsoratra taloha ity, saingy tiako ny mampahafantatra anao fa nahita anao tamin'ny alàlan'ny ask.com aho! Mampihomehy, sa tsy izany?
Mampiasa ask.com aho rehefa mitady zavatra tena miavaka. Noho ny antony sasany dia manondro ahy amin'ny lalana marina foana izy ireo.
Mar 7, 2008 amin'ny 10: 36 AM
Mahafinaritra ny mihaino azy! Novakiako fotsiny izao Anontanio manala ireo olona sasantsasany ary mieritreritra hampiasa Google - fa ny valiny dia tsara ny moteran'izy ireo amin'ny fangatahana manokana. Tsy dia nampiasaiko firy izy io, fa nandre zavatra tsara tamin'ny lojika sy ny algorithms ifotoran'ny moteran'izy ireo.